Tag: haino aman-jery nahazo | Martech Zone
Tag: haino aman-jery nahazo vola
POE dia fanafohezana ny fomba telo amin'ny fizarana atiny. Ny haino aman-jery Paid, Owned and Earned dia paikady azo iainana amin'ny fananganana ny fahefanao sy fanaparitahana ny fahafahanao miditra amin'ny media sosialy. Paid, Owned, Earned Media Paid Media - dia ny fampiasana fantsona fanaovana dokambarotra karama handefasana ny fifamoivoizana sy ny hafatra ankapobeny an'ny marika amin'ny atiny. Natao hamoronana fahatsiarovan-tena, hanombohana endrika haino aman-jery hafa ary hahitan'ny mpihaino vaovao anao ny atiny.
Media, karamaina ary ahazoana vola: famaritana, mpihaino ary endri-javatra
Miankina amin'ny fantsona voalohany 3 ny fampiroboroboana atiny - haino aman-jery karama, haino aman-jery tompona ary haino aman-jery azo. Na dia tsy vaovao aza ireo karazana haino aman-jery ireo, dia ny nalaza sy ny fanatonana ireo haino aman-jery tompony no nahazoany fiovana izay mihantsy ny haino aman-jery mahazatra be karama. Pamela Bustard, The Media Octopus Paid, Owned and Earned Media Definitions Araka ny The Media Octopus, ny famaritana dia: Paid Media - Izay zavatra rehetra aloa mba hitondrana ny fifamoivoizana ho an'ny tompony
Jamballa: Fanentanana ho an'ny mpamorona bilaogera
Alahady, Jona 1, 2014 Douglas Karr
Ny fanentanana ny mpitoraka bilaogy dia afaka manome ny orinasa tsikera avo lenta, fanentanana ny vokatra ary fahatsapana marika tsara, amin'ny alàlan'ny fifanarahana amin'ireo bilaogera hajaina eo amin'ny sehatry ny indostria. Jamballa dia mpitoraka bilaogy sy marika mifanentana amin'ny serivisy vaovao mifototra amin'ny fepetra faritan'izy ireo. Midika izany fa tsy manahirana ny bilaogera velively ny vokatra tsy mahaliana azy ireo ary ny orinasa dia mifamatotra amin'ireo bilaogera te hiara-hiasa aminy fotsiny. Jamballa koa dia manolotra serivisy famoaham-baovao izay mankany
Alatsinainy Desambra 9, 2013 Alatsinainy Desambra 9, 2013 Douglas Karr
Ny Unified dia manome ny haitao sy ny fampiharana marketing cloud izay ahafahan'ny fikambanananao mitantana ny androm-piainan'ny marketing ara-tsosialy manontolo, manome ROI mazava sy isa. Ny sehatr'i Unified dia manome rafitra firaketana mirakitra marika, masoivoho ary mpivarotra. Soa azo avy amin'ny Unified's Social Operating Platform Manana sy mifehy ny angon-drakitra momba ny varotrao - Ny Social Operating Platform dia mampifandray ireo masoivoho, mpivarotra ary marika rehetra iarahanao miasa ao anatin'ny rafitra marketing rahona tokana, manome anao fomba fijery feno ny rehetra